I-Apple iqeshe iingcali ezininzi kwihlabathi leemoto | IPhone iindaba
I-Apple iqeshe iingcali ezininzi kwihlabathi leemoto
Iphupha lemoto i-Apple lisasebenza ngokuchanekileyo, ngalo lonke ixesha befihla kancinci xa kuziwa ekucaciseni ukuba banomdla kwitekhnoloji yezithuthi eCupertino. Kwaye kolu hlobo lwento, iApple ihlala ifuna ukuzingqonga ngeyona nto ibalaseleyo, ke abayeki ukuqesha abasebenzi abatsha bezinye iinkampani ezenzekelayo, nangona abaphathi bezinye iinkampani becaphuka. Lo nto, iindaba zamva nje kukuba uApple uqeshe owayesakuba ngumqeshwa weTesla Motors kunye no-Aston Martin ukusebenza kwiApple Car.
Umphathi omkhulu weTesla Motors ngokuqhula ubiza iApple "ngamangcwaba kaTesla" kuba esithi baqesha abasebenzi ababekhe babagxotha ngaphambili. Into angakhankanyi rhoqo, nangona kunjalo, kukuba abasebenzi bezobunjineli eTesla Motors bayarhubuluza nababesakuba ngabasebenzi beApple, bambalwa kakhulu abasebenzi beTesla Motors bangaphambili abaqeshwe yiApple kwikomkhulu layo laseCupertino. Ngoku baziphindezela kwakhona eCupertino, kwaye kukuba baqeshe uSekela Mongameli weTesla yoBunjineli beZithuthi, owayekade esebenza njengeNjineli eyiNtloko eAston Martin.
Oku kuqala ukubonakala ukuba iApple inomdla, uChris Porritt ngoyena ukhethiweyo, kubonakala ngathi iApple ifuna ukuba yeyona ntshatsheli ibalaseleyo kule projekthi ibalulekileyo ukuze kungabikho nto ihamba gwenxa. Umhla obekiweyo njengoko sele sitshilo ngunyaka we-2019 onomhla wokumiliselwa kwi-2022, nangona kunjalo, kubonakala ngathi inokuthoba isantya kakhulu. U-Porritt ubenomsebenzi omde e-UK, eqala njengomfundi kwi-Land Rover, apho waphela waba yiNjineli eyiNqununu, ukugqiba e-Aston Martin njenge-Injineli eyiNtloko kude kube ngo-2013 ukusukela ngo-1997, oyena mntu ungoyena mntu wezona zithuthi zibalaseleyo emhlabeni. Inyaniso I-Aston Martin yeyizimoto yintoni i-Apple kwitekhnoloji, uyilo, umgangatho kunye namandla kwibhotile entle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » I-Apple iqeshe iingcali ezininzi kwihlabathi leemoto
IOS 9 sele ikwi-84% yezixhobo ezifanelekileyo
Inkululeko POP, intanethi yasimahla kuyo yonke indawo ekugqibeleni ifika eSpain!